“Kuwa ka maseyrsan Modric, hala dhintaan maseyrkooda”… Rakitić oo u jawaab celiyay wakiilka Cristiano Ronaldo – Gool FM
“Kuwa ka maseyrsan Modric, hala dhintaan maseyrkooda”… Rakitić oo u jawaab celiyay wakiilka Cristiano Ronaldo
(Barcelona) 05 Sab 2018. Laacibka kooxda Barcelona ee Ivan Rakitić ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in laacibka Real Madrid ee Luka Modric uu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican xiligan la joogo.
Ivan Rakitić ayaa door weyn oo muuqda kala soo ciyaaray khadka dhexe xulka qaranka Croatia, taasoo ka saaciday in ay gaaraan kulanka fiinalka koobka aduunka 2018 ee dalka Russia, kahor inta aysan ugu dambeyn kaga guuleysan xulka France.
“Luka Modric waa ciyaaryahanka xiligan ugu fiican aduunka, dhamaan shacabka reer Croatia waan ku faanaa”.
“Waxaan rajeeneynaa inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or, sababtoo ah waa mid uu u qalmo”.
Ivan Rakitić ayaa intaas kadib wuxuu u jawaab celiyay wakiilka Cristiano Ronaldo ee Jorge Mendes kadib uu weerar ku qaaday xiriirka UEFA, sababa la xiriira in Luka Modric uu ku guuleestay abaal amrinta xidiga sanadka ee Yurub.
“Kuwa ka maseyrsan Luka Modric, hala dhintaan maseyrkooda, waan ku faanayaa waana ku faraxsanahay, sida inaan ku guuleestay abaal marintan aniga”.
“Waxaan codsaday inaan ka tago Atletico Madrid, sida uu sameeyay Gabi”… Filipe Luís